This manual (Karen language) documents traditional Karen agricultural techniques that reduce environmental impacts and promote sustainable farming. This is in contrast to modern techniques which normally involve an increased use of pesticides and seeds with shorter life spans than indigenous seeds.
ဤစားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးလမ်းညွှန်စာအုပ် (ကရင်ဘာသာ) သည် ဒေသခံပြည်သူများမှ ၎င်းတို့၏နေရာဒေသအ တွင်း စားနပ်ရိ က္ခာဖူလုံမှုအခြေအနေ မည်မျှအတိုင်းအတာအထိရှိသည် နှင့်ပတ်သက်ပြီး ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင်စူး စမ်းလေ့လာ နိုင်ရန်အတွက် ရည် စူးပြီးထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမျှမက မိသားစု တစ်စုတွင်ဖြစ်စေ၊ ရပ်ရွာတစ်ခုလုံးတွင်ဖြစ်စေ၊ ဒေ သတစ်ခုလုံး တွင် ဖြစ်စေ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု ရှိ အောင် (သို့မဟုတ်) ရှိရင်းစွဲစားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုအခြေအနေ ထက်ပိုမို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် မည်ကဲ့သို့နည်းလမ်းများ ရှာဖွေလုပ်ဆောင်ရမည်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဤလမ်းညွှန်စာအုပ် တွင် လမ်းညွှန်ထား ပါသည်။